XOG:- Maxay tahay uljeedka rasmiga ah uu ra’iisul wasaare ku-xigeenka ugu tagay magaalada B/weyne? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Maxay tahay uljeedka rasmiga ah uu ra’iisul wasaare ku-xigeenka ugu tagay magaalada B/weyne?
Iyadoo maalmihii ugu dambeysay magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu ku sugnaa ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte, ayaa hadane waxaa la sheegayaa in uljeedka ugu weyn ee safarkiisa uu yahay sidii uu ku hakin lahaa maamul ay qorsheynayaan inay sameystaan odayaasha uu hogaamiyo Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Wafdiga uu hogaaminayo ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa kulamo isdaba joog ah labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada B/weyne kula yeeshay odayaasha iyo waxgaradka oo uu ka mid yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Kulamadaasi ayaa la sheegay inay kusoo dhamaadeen mid shuruudo adag la hor-dhigay wafdiga ra’iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte, iyadoona shuruuda ugu adag ay ahayd in gebi ahaan la laalo shirka Jowhar ee maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Dhinaca kale, ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegeysa in uljeedka ugu weyne ee wafdiga Maxamed Cumar Carte ay tahay inay hakiyaan islamarkaana ku ogaadaan heerka ay gaarsiisan tahay rabitaanka odayaasha diidan qorshaha dowladda federaalka, ee doonaya inay maamul ugu dhisaan gobolka Hiiraan.
Ugu dambeyntii, wada-hadal iyo kulamo waqti dheer qaatay kadib ayaa waxay odayaasha Hiiraan sheegeen inuusan jirin wax heshiis rasmi ah oo ay la galeen wafdiga ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda, balse sheegay inay odayaashaasi dalbadeen in la joojiyo, islamarkaana meesha laga saaro shirka Jowhar ee maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga sida uu suurto-gal ku noqon karo in codsiga ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada B/weyne iyo inkale, waxaana xilligaan magaalada Jowhar ka soconaaya shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo ay odayaasha Hiiraan qaarkood si weyn uga soo horjeesteen.